Ogaden News Agency (ONA) – CWXO waa muraayadda halgankeena iyo matoorka uu ku dhaqaaqayo – Dawiil
CWXO waa muraayadda halgankeena iyo matoorka uu ku dhaqaaqayo – Dawiil
Maqaaladii aan ku soo qaadanay dhacdadii uu goobjooga ka ahaa N/hure Maxamad rashiid Sh. Cabdulaahi ayuu dhambaalkan cidhbinta ka soo direy N/h Dawiil oo ah xubin ka mid ah CWXO qaybta warfaafinta, isagoo ku tilmaamay warbixinta N/hure Maxamad rashiid inay xanbaarsanayd xusuus halgan oo ka warbixinaysa xaaladaha uu soo maray CWXO.
Waxaana ugu xiiso badnaa sheekadaa markii uu N/hure Axmed yare digo iyo danbas ka dhigay laba gaadhi oo ay askarta wayaanuhu ku safrayeen si ay u weeraraan xarunta CWXO una wax yeeleeyaan shacabka Soomaalida Ogaadeenya. Falalka noocaa ah in xubin uu kali ahaantii si geesnimo leh u fuliyo ma’aha arin mar la arag ah ee waa mid si joogta ah ay u fuliyaan xubnaha CWXO.
Anigoo tixraacayna maqaalkaa waxaan maanta si kooban idiinku soo bandhigaynaa, qodobo muhiim ah oo ka xogwaramaya CWXO iyo baahida keentay.
1984-tii ayay ahayd goortii la aas aasay JWXO, 6 sano kadibna waxaa dhidibada loo taagay CWXO. Xilligaas waddanka Ogaadeenya iyo shacabkeenuba wuxuu ku jiray xilli aad u qalafsan oo kala guur ahaa, waxayna ahayd dhamaadkii xukuumadii Derge-ga iyo billawgii xukuumada wayaanaha. Siyaasadda JWXO oo gudaha dalka Ogaadeenya xilligaas curdan ku ahayd ayaa loo baahday in la sameeyo tiro ciidan ah oo asaas u noqda Ciidanka Dfaaca Qaranka Ogaadeenya.
JWXO oo ka abuurantay rabitaanka shacabka Soomaalida Ogaadeenya, waxaa qasab ku noqoatay in ay difaacdo shacabkeeda kana midho dhaliso riyada dadwaynaha ee ahayd in aan la ogolaanin gumaysi horleh oo ay horkacayeen wayanaha Tigraay ee woqooyiga Itoobiya ka soo kicitimy. Si arintaasi looga hortagi karayna waxay noqotay uun, in la helo ciidan adag oo bulshada Ogaadeenya ka dhax abuurma oo difaaca naftooda iyo maalkoodaba.
Waxaad xusuusnaataan mar kastaba CWXO in uu yahay muraayadda halgankeena iyo matoorka uu ku dhaqaaqayo halgankeenu. Gumaysiguna waxa uu ka haybaysanayo waa CWXO oo uu mar walba ka ladi la’yahay kulaylkiisa.
Hadaan hoos ugu daadagno qodobada uu ka koobanyahay waajibaadka uu fulinayo CWXO waxay ka koobanyihiin 8 qodob oo sidan isugu xigxiga.
1: Burburinta cududda ciidanka cadawga.
2: Ka caabinta dulmiga wajiyada badan leh ee cadawga shacabka
3: Fashilinta shirqoollada iyo dhagarta qorshayaasha siyaasadeed ee cadawga.
4: Korinta garaadka iyo wacgiga halgan ee N/hurayaasha iyo Xubnaha
Jabhadda Waddaniga Xoraynta Ogaadeenya.
5: Ilaalinta Midnimada shacbiga Soomaalida Ogaadeenya.
6: Ilaalinta khayraadka dabiiciga ah iyo dhulka Ogaadeenya.
7: Ilaalinta sirta jabhadda iyo hadntida dadwaynaha Soomaalida Ogaadeenya
8: Dhawridda hiddaha iyo dhaqanka suuban ee Soomaalida Ogaadeenya.
Intaas oo qodob mid waliba wuxuu ku siinayaa micno kooban oo hadana xanbaarsan ujeedo ballaadhan. Waana aragti ka duulaysa hadafka iyo rabitaankakama danbaysta ah ee Shacbiga Soomalida Ogaadeenya ee uu Gumaysigu ragaadiyay.
Haduu Eebeha Kariimka ah ka raalli noqdo qaybaha danbe ayaan ku soo qaadan doonaa dhacdooyin aan goobjooga ka ahaa ama aan maqlay, kuwaasoo idiin ifin doonaa heerka uu gaadhsiisan yahay CWXO iyo hawlgalada ay fuliyaan.